Soo dhowaada! Waxaanu leenahay abukaatayaal iyo hagayaasha hordhaca oo ka kala yimid dhammaan dunidda. In badan oo ka mid ah xubanahayaga shaqaalahu waxay soo mareen dhab ahaan meesha aad hadda marayso maanta: ku cusub Iswiidhan. Xagayada waxaad la kulmi doontaa dad ballan leh oo kaa caawin doonaa in aad jidkaaga ka hesho bulshadda Iswiidhan iyo nolosha shaqada. Ujeedadayadu waa in aad adigu dareento ammaan gudaha Iswiidhan. Oo aad adigu u hesho shaqo si degdega, ama koorso kugu habboon.